Posted by SLIP in မိဘကျေးဇူး
ကျွန်တော်တို့တွေ အားလုံး အမေ့ဆုံးသော အရာတစ်ခု ရှိပါတယ်။ အခြား မဟုတ်ပါဘူး။ မိဘကျေးဇူးဆပ်ခြင်း ဆိုတာပါပဲ။ မိဘတွေရဲ့ ကျေးဇူးကို ဆပ်ရမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးသိကြပါတယ်။ ကလေးဘ၀ ကတည်းက ပုံပြင်တွေ၊ ကဗျာတွေ၊ အမျိုးမျိုး သင်ခဲ့ကြပြီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ဘာကြောင့် အခုချိန်ထိ မိဘ ကျေးဇူးကို ဆပ်ဖို့ အကောင်အထည် မဖေါ်ကြတာလဲ??၊ မေ့လျှော့ ပေါ့ဆ နေကြတာလဲ??၊ မမေ့လျှော့တဲ့ သူတွေကရော ဒါလေးလုပ်ဖို့ကို ဘာကြောင့် ရေးကြီးခွင့်ကျယ် လုပ်နေကြရတာလဲ??။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးကြည့်ပါတယ်။ ကိုယ်ဖက်က ပြည့်စုံမှ ဆပ်မှာလား?။ အဲဒီလို လုပ်လို့တော့ မရပြန်ဘူးဗျ။ ကျွန်တော်တို့က တဖြည်းဖြည်း ရင့်ကျက် တည်ငြိမ်လာပြီး ပြည့်စုံလာတယ် ပဲထားအုံး မိဘတွေရဲ့ အသက်ကရော၊ ရပ်နေမှာမှမဟုတ်တာ။ သူတို့တွေလည်း အသက်တွေ ကြီးလာမှာပဲ။ ဒီလိုနဲ့ ကျေးဇူးဆပ်ဖို့ ပြင်နေရင်းနဲ့ပဲ မဆပ်လိုက်ရတဲ့ သားသ္မီးတွေလည်း တစ်ပုံကြီးရှိပါတယ်။ မိခင် ဒါမှမဟုတ် ဖခင် တစ်ဦးသာ ရှိတော့တဲ့သူတွေ ဆိုရင် ပိုပြီးတောင် အလေးအနက် ထားသင့်ပါတယ်။ မိဘထက် အရေကြီးတဲ့သူ၊ မိဘထက် ကျေးဇူးကြီးတဲ့သူ ဆိုတာ ရှိနိုင်ပါ့မလား။ မိဘကျေးဇူး ဆပ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာ တော်ရုံတန်ရုံ အခွင့်အရေးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ၀မ်းတွင်မှာ သန္ဓေ စပြီး တည်ကတည်းနေ အခုချိန်ထိ မိဘဆီက မှီခိုမှု ကင်းအောင် ဘယ်လောက် နေနိုင်ပြီလဲ။ အခုချိန် ချွတ်ခြုံကျသွားရင်ရော မိဘကလွဲပြီး ကျွန်တော်တို့ကို ဘယ်သူကများ လက်ခံမှာတဲ့လဲ..........။
သည်ကနေ့ မင်းဖြစ်နေသမျှ၊ နောက်တစ်နေ့ မင်းဖြစ်မယ်လို့ မျှော်မှန်းနိုင်သမျှ အားလုံး မင်းမိဘ ကျေးဇူကြောင့်။
ငါ့ဘ၀တွင် ရတနာသုံးပါးသည် နိဗ္ဗာန်၊ အမေသည် အသက်သခင်၊ အဖေသည် မီးရှူးတိုင်၊ ဆရာသည် လမ်းပြကြယ်။
ငါ့ဘ၀တွင် ငါ့မိဘသာ ရှိနေပါစေ။ ဒုက္ခဟူသမျှ လက်ပြခေါ်ပါ့မယ်။
ငွေနဲ့ အရာရာကို ဖန်တီးယူနိုင်တယ်တဲ့။ ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် မိဘတို့ရဲ့ မေတ္တာ၊ စေတနာ၊ အနစ်နာခံမှု တွေကိုတော့ ငွေနဲ့ လဲလို့ မရပါဘူး။
မိခင်တိုင်းရဲ့ရင်ခွင်ဟာ သားသ္မီးတိုင်းအတွက် ဆောင်းမှာ နွေးထွေးမှုကို ပေးနိုင်သလို နွေမှာလည်း အေးမြမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
အပူမီးကုဋေ အမေ့ရင်မှာ ၀န်းရံသော်လည်း အပြုံးမပျက် သားမှေးဆက်ရန် သားချော့တေးသံ ရင်တွင်းမှာလေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ သီဆိုဆဲပါလေ။
လပြည့်ည လ၀န်းထက် အမေ့မျက်ဝန်းက ပို၍ စိုရွှန်းတောက်ပ၏။
ငါ့ရဲ့ပထမအချစ်က မိခင်၊ ဒုတိယနှလုံးသား ကဖခင်။
လောကမှာ မိမိအပေါ် ဘယ်သူတွေ မေတ္တာပျက်ပျက်၊ မိဘနှစ်ပါးက မေတ္တာမပျက်ဘူး။
စီးပွားရေး တောင့်တင်း ခိုင်မာသူတို့သည် မိဘအား ထောက်ပံ့ ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းဟူသော ကြီးမားသော ဆုလဘ်ကို ရရှိကြသည်။
မသိတတ်ခင်က မိဘကို စိတ်ညစ်စေတာကို ထားလိုက်တော့။ အခု သိတတ်ပြီ။ မိဘကို ပျော်ရွှင်ပါစေတော့။
မိဘကျေးဇူးကို ဆပ်ခွင့်ရတုန်းမှာ အရအမိဆပ်ပါ။
မိဘ၊ ဆရာရဲ့ မေတ္တာကို အောင်မြင်မှုနဲ့ ကျေးဇူးဆပ်တာအကောင်းဆုံး။
နောင်ထွန်း says 23 May 2008 at 23:47
လွမ်းဇာနည် says 16 September 2008 at 12:02
ကျွန်တော်လည်း အမေကို အရမ်းချစ်တဲ့ သားမို့
ကျွန်တော် နှလုံးသားထဲက အမေ့မေတ္တာတော်ဖွဲ့ ကဗျာ [ရတု ] လေးကိုလည်း လာခံစားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
အမေ့မေတ္တာကို ဘုရားဟောနဲ့ တွဲပြီး မီးမောင်းထိုးပြထားပါယ်
kogyichan says4February 2010 at 17:54